CBD miyuu kaa gaajaysan yahay mise kaa caawinayaa inaad miisaankaaga dhinto? • Dawooyinka Inc.eu
Cannabidiol (CBD) waa mid ka mid ah xeryahooda badan oo laga helo geedka cannabis. CBD waxaa loo isticmaalaa wax ka qabashada cabashooyinka caafimaad ee badan, laakiin waad la mid tahay THC sidoo kale ma gaajeysan tahay isticmaalka saliida CBD? Mise waxay kaa caawin kartaa inaad lumiso miisaanka?
Faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo saliida CBD waxaa ka mid ah yareynta calaamadaha walaaca, la dagaallanka kansarka, daweynta finanka iyo hubinta miisaanka oo yaraada.
1 Munchies iyo rabitaanka cuntada
2 CBD ma kaa caawin kartaa inaad lumiso miisaanka?
3 CBD waxay kobcisaa unugyada dufanka badan ee bunni
4 Nolol wanaagsan
5 CBD miyey kobcin kartaa korodhka miisaanka?
Munchies iyo rabitaanka cuntada
Waxaa la ogsoon yahay in waxyeelada ka dhasha sigaar cabista marijuana oo leh maadada THC ay sarreyso ay tahay gaajo xad dhaaf ah, laakiin saliida CBD sidoo kale miyay kaa gaajaysan tahay? Sharaxaad fudud oo loogu talagalay munchies Markaad isticmaaleyso THC, waxay firfircoonaan qaboojiyeyaasha CB1 ee maskaxda. Daaweeyahaani wuxuu saameeyaa jirka, oo ay ku jiraan kicinta rabitaanka cuntada. Saliida CBD lama macaamili karto duubayaasha CB1 ee maskaxda sida THC. Si kastaba ha noqotee, wali waxay si aan toos ahayn u saameyn kartaa gaajada. Tusaale ahaan, qofka walwalka lihi wuxuu dareemayaa cunto yaraan hoos u dhac ku yimaada culeyska maskaxda oo kordhay awgeed. Xitaa qofka xanuunka haya wax yar ama damac kama qabo inuu cuno, marka loo eego xaalada uu ku sugan yahay. Maxay saliida CBD qabtaa waxay yareysaa walbahaarka iyo xanuunka, oo kobcin kara cunno caafimaad leh.
CBD ma kaa caawin kartaa inaad lumiso miisaanka?
In kasta oo saliida CBD aysan saameyn toos ah ku laheyn rabitaanka cuntada qofka, waxay saameyn ku yeelan kartaa jirka aadanaha iyo sida uu u shaqeeyo. Tani waxay kaa caawin kartaa haddii aad rabto inaad miisaankaaga dhinto. Waxaad ku soo bandhigi kartaa CBD cuntadaada tusaale ahaan, cunista calool-xumada CBD. Daraasad laba toddobaad ah oo xayawaan ah oo lagu sameeyay jiirka ayaa muujisay in jiirku lumiyay miisaanka jirka ee muhiimka ah ka dib markii irbado CBD ah. Maadaama CBD aan lagu siin hadal ahaan, cilmi baarayaashu wali ma hubo inay tani beddeli doonto natiijooyinka. In kasta oo THC ay dhaqaajiso soo dhoweeyeyaasha CB1, CBD waxay saameyn ku yeelataa maaddooyinka jirka ku jira ee jidhka bini'aadamka ah ee xidha qabtayaashan. Tani waxay gacan ka geysaneysaa yareynta rabitaanka cuntada waxayna ka hortagi kartaa cunnada badan iyo cayilka.
CBD waxay kobcisaa unugyada dufanka badan ee bunni
Jirka bini’aadamka wuxuu ka kooban yahay laba nooc oo dufan ah: cad iyo bunni. Badanaa baruurta ku jirta jirkeena waa baruur cad. Dufanka cad wuxuu mas'uul ka yahay keydinta iyo bixinta tamarta, sidoo kale wuxuu ilaaliyaa oo xaddidaa xubnaha. Baruurta cad ee xad dhaafka ah waxay u horseedi kartaa cuduro daba dheeraada sida cudurada wadnaha iyo sokorowga.
Dufanka buniga ah, dhanka kale, wuxuu abuuraa kuleyl isagoo gubaya kalooriyada. Cilmi-baaris ayaa muujisay in dadka leh nolol firfircoon oo caafimaad leh ay leeyihiin dufan bunni ah oo ka badan qofka caadiga ah. Habka ugu caamsan ee loogu badalo baruurta cad baruurta buniga ah waa jimicsi, hurdo kugu filan, iyo si la yaab leh oo kugu filan adigoo naftaada u soo bandhigaya heerkulka qabow. Jiritaanka alaabooyinka CBD ee jirkaaga ayaa kaa caawin kara in dufan badan oo cad loo beddelo dufan bunni ah. Isticmaalka CBD wuxuu kobcin karaa "maqaarka" unugyada baruurta. Waxay tan ku sameysaa iyadoo la xoojinayo hidda-wadaha dhiirrigeliya dufanka buniga ah iyo sidoo kale borotiinka.
In kasta oo qaadashada CBD ay kaa caawin karto inaad lumiso miisaanka, haddana weli waa lagama maarmaan in la helo qaab nololeed wanaagsan adiga oo hela hurdo kugu filan, jimicsi joogto ah iyo raacitaanka cunto isku dheellitiran. Kaliya markaa CBD ayaa caawin karta. Maaddaama CBD ay ka caawin karto kahortagga cayilka, waxay ka hortagi kartaa cudurada kale ee dheef-shiid kiimikaadka. Daraasad 2018 ah waxay muujineysaa xiriir dhow oo ka dhexeeya cayilka iyo cilladaha dheef-shiid kiimikaadka sida kolestaroolka sare.
CBD miyey kobcin kartaa korodhka miisaanka?
CBD waxay caan ku tahay saameynteeda faa'iido leh ee sababa miisaanka oo yaraada, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa habka kor loogu qaado miisaanka. Daraasado ayaa sidoo kale lagu sameeyay tan, taas oo nasiibdarro aan cilmi ahaan loo xaqiijin. Markaa waxay umuuqataa in saameynta CBD ay aad uguxirantahay jawaabta jirka tanina qofwalba way kaga duwanaan kartaa. Waxay umuuqataa in cannabinoidkani uu kab u noqon karo cuntadaada iyo qaab nololeedkaaga si loo wanaajiyo caafimaadkaaga.
Cilmi-baaristu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa fahamka CBD iyo saameynteeda. Daraasado badan oo xayawaan ah ayaa muujiyay natiijooyin rajo leh, laakiin weli waxaa loo baahan yahay cilmi baaris dheeraad ah oo ku saabsan CBD-da bini-aadamka si buuxda loo fahmo sida ay u beddeli karto jirkeena. Intaas ka dib, waxay ku sii jiri doontaa caddayn sheeko xasaasi ah oo adiga ayay kugu xidhan tahay haddii aad rabto inaad u isticmaasho kaabis ahaan si aad u dhammaystirto cuntadaada maalinlaha ah iyo qaab nololeedkaaga ama aad u isticmaasho cunnooyinka kale ama habab kale si aad caafimaad u ahaato.
Akhri wax dheeraad ah usa.inquirer.net (Source, EN)
Xashiishka Ingriiska waxay soo saartaa noocyo badan oo tartan tartan ah oo ah waxyaabaha loo yaqaan 'CBD'
Nooca CBD ee Cannabis-ka Ingiriiska ayaa abuuray khad cusub oo ah alaabooyinka CBD ee u dhigma qiimaha sarreeya qaybta ...
Horumarrada adduunka oo dhami waxay u baahan yihiin siyaasad cusub oo dawooyin
Khamiistii la soo dhaafay, Guddiga Xakamaynta Mukhaadaraadka Caalamiga ah (INCB) waxay ka wada hadleen horumarka ka dhacaya adduunka oo dhan ...
5 codsiyada ugu wanaagsan ee cannabis ee xilligan, taas oo aad hadda ka soo dejisan kartaa Android ama iPhone
Xashiishku wuu ka badan yahay helitaanka "sare". Sida hiwaayadaha sida biirka farsamada, bowling ama ...